08/14/12 ~ Myanmar Forward
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ (ဒုတိယအကြိမ် စီမံကိန်းကော်မရှင်အစည်းအဝေး ၊ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်)
Posted by drmyochit Tuesday, August 14, 2012, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ အစည်းအဝေး ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ကျွန်တော်တို့ ချမှတ်ခဲ့ကြတဲ့ Reform Stretegy နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြို့ပြနဲ့ ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ City Plan ၊ Town Plan နဲ့ Village Plan တို့ ရေးဆွဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မန္တလေးမြို့တို့ရဲ့ City Plan များကို လေ့လာ ဆွေးနွေး အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ပြနဲ့ကျေးလက် စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာမှာ ပြည်သူဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် ပြည်သူများရဲ့ အဆင့် အတန်းရှိစွာ နေထိုင်နိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာရရှိရေး၊ သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေး၊ ပတ်ဝန်း ကျင်သန့်ရှင်းရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရေးစတဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ရေးဆွဲအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးဟာ အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖြစ်သကဲ့သို့ အနာဂတ်မှာ မြို့ပြများရဲ့ စနစ်ကျနမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဟာလည်း များစွာအရေး ပါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၅၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မြို့ပြမှာနေထိုင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှနဲ့ အရှေ့တောင် အာရှမှာတော့ လူဦးရေ သန်း (၆၀၀) ရှိတဲ့အနက် မြို့ပြမှာ နေထိုင်သူဟာ ၄၄.၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မြို့ပြမှာ နေထိုင်သူဟာ ၃၂.၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ အထက်အောက် ထွက်ကုန်ဆုံတဲ့ မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ မောင်းနှင် အားတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အာရှဒေသရဲ့ အဆင့်အတန်းမီ မြို့ကြီးတစ်မြို့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာများစွာ ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်ကဆိုရင် အာရှမှာ စံထားရတဲ့မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းဘုရင်မ မွေးနေ့အမှတ်တရ ကရင်နီဒုက္ခသည်တွေ သစ်ပင်စိုက်
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ထိုင်းဘုရင်မရဲ့ ၈၀ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကရင်နီဒုက္ခသည်များ၊ ထိုင်းလူမှု အဖွဲ့ အစည်းများ၊ ဒေသခံအာဏာ ပိုင်များနဲ့နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း များပူးပေါင်းပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ မွေးနေ့အမှတ်တရ သစ်ပင်စိုက် အခမ်းအနားတရပ်ပြုပါတယ်။
အမှတ် (၁) ဒုက္ခသည် စခန်းမှာပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားကို ထိုင်းဒေသခံ အာဏာပိုင်များ၊ မယ်ဟောင်ဆောင် အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR၊ ဒုက္ခသည်များအတွက် ကက်သလစ် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ COERR ၊ ကျောင်းသူ/ သားများနဲ့စခန်းတွင်းရှိသူများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။
မြ၀တီမြို့နယ်ရှိ ကရင်လူငယ် ၁၀၀ကျော်နှင့် KYO ပထမဆုံး အကြိမ် နှီးနှောဖလှယ်
လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အမျိုးသားရေးတွင် ကရင်လူငယ်များ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တတ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကရင်လူငယ်အစည်း အရုံး-KYO က မြ၀တီမြို့နယ်ရှိ နို့ဖိုးရွာ၌ ကရင်လူငယ် ၁၀၀ကျော်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့က ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ဦးဆောင်သည့် KYO ဒုဥက္ကဌ စောအဲ့ကလူစေးက “အရင်ကဆို ဒီလိုနေရာတွေမှာ လူငယ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို အပစ်ရပ်စဲ ရေးကာလမှာ ဒီလူငယ်မောင် မယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရတာ ၀မ်းသာတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
မီဒီယာတွေကို အရေးယူဖို့ သံတမန်တွေကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မှ ဖြစ်တော့မည်
တနေ့ က သမ္မတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်က နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပါတ်သက်၍ သတင်းအမှားတွေကို မီဒီယာမှ တဆင့် တင်ပြနေသည်ကို ပြန်လည် ရှင်းလင်းရန်အတွက် ဆောင်ရွက်နေပြီဆိုသော သတင်းဖတ်ရသည် ။ အလွန်တရာ နောက်ကျ နေသော်လည်း နောင်တဆိုသည်မှာ ခံစားသိရှိရသူအဖို့တန်ဘိုးရှိစမြဲမို့၎င်းသတင်းကို ကြိုဆိုသည် ။ စစ်စစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌါနမှ ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော အရေးပေါ်သ တင်းအမှားများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ မီဒီယာများမှ တဆင့် ထုတ်ပြန်နေပါက သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဓါတ်ပုံပါကားချပ် ၊ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓါတ်ပုံပါကားချပ်နှင့် အလံတော်ကို နင်းခြေသူများ ပေါ်ပေါက်လာစရာ အကြောင်းမရှိ ။ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌါနက ပေါ့လျှော့မှုကြောင့် ဖြစ်နေသလို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အကြံပေးပုဂိုလ် များကလည်း နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ပျက်ပြား လာစေမည့် အကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ စောစောကပင် အကြံကောင်းများ မပေးနိုင်ခဲ့ ဟု ထင်ရသည် ။
လွှတ်တော်အမတ်များ ကိုယ်တိုင် ရေးသားသည့် လွှတ်တော် သတင်းများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ပါဝင်မည့် လွှတ်တော်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေနိုင်ရန် စာမူများ တောင်းခံထားသည်ဟု သိရှိရသည်။ “လွှတ်တော်ထဲမှာ စာမူ တောင်းပါတယ်။ ဆောင်းပါးလို့ပဲ ပြောတော့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ ရေးလို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။ အန်တီ ထင်တာတော့ လွှတ်တော်တွင်း သတင်းတွေ၊ အခြား သိမှတ်ဖွယ်ရာတွေ ပါမယ်ထင်တယ်” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်ကမဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
သဘာဝအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများအကြောင်း သိရှိစေရန် ဝက်ဘ်ဆိုက်လွှင့်တင်
သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ၊ သတင်းများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနမှ လွှင့်တင်ပေး ထားသည့် http://www.rrdmyanmar.org ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက လွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မလေး ရှား မှရိုဟင် ဂျာ များ ၏ယု တ်မာ မှု များ (မလေး မှရွေမြန်မာ အထူးသ တိထားရန်)
မလေးရှားတွင်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကြုတွေ့နေရသော လူသတ်အကြမ်းဖက်ခံရမူလူပျောက်မူ နဲ့ ရိုက်နက်ခံရမူ စသည့် အမူတွဲများကို၉.၈.၂၀၁၂ တွင်UNHCR ရုံးသို့ တင်ပြခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။၄င်းတင်ပြချက်များမှ လက်ရှိဖြစ်ပျက်ခဲ့သော မလေးရှားရှိအမူများမှာ…..
(၁)၁၁.၆.၂၀၁၂ ညပိုင်း ၉း၃၀ အချိန်တွင် Srigonbak အနီးရှိ ကိုမင်းမင်းထွန်းသည် အလုပ်မှစက်ဘီးဖြင့် ပြန်လာစဉ် ကားနံပါတ် WED 8904 အဝါရောင် WIRA ကားဖြင့်ကိုမင်းမင်းထွန်းစီလာသောစက်ဘီးကို နောက်မှ ဝင်တိုက်ကာ ၄င်း ကိုမင်းမင်းထွန်းအား ဆွဲတင်သွားသည်ကို မျက်မြင်များပြောဆိုချက်အရ သိ့ရှိရသည်။
(၂) ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဂျိုဟိုးဘာရူး ကိုတာသင်္ဂီ တွင် ကိုအချက် နှင့် ကိုအောင်ဇော်မိုး . ကိုပျော့ချေ ရခိုင် သုံးဦးနေထိုင်တဲ့ အိမ်သို့ အကြမ်းဖက်လိုသူတစ်စုမှ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ဝင်ရောက်လာပြီး ဓုတ် ဓါး လူကိုသေစေနှိင်တဲ့ လက်နက်များဖြင့် ရိုက်နက်ခဲ့ကြသည် သုံးဦးထဲ့မှာ တစ်ဦးမှာ ကိုတာသင်္ဂီဆေးရုံးကြီးတွင် အတွင်းလူနာအဖြစ် ဆေး ကုသမူခံယူနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်
(၃) ဇူလိူင်လ ၁၂ နေတွင် ရှားလမ်းရှိ Section7တွင် ကိုလင်းနှိင်သည် ညဖက်အလုပ် မှ အိမ်သို့ ပြန်လာချိန်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူ ရိုဟင်ဂျာ ဟုယူဆရသူ တစ်စုမှ ကားဖြင့် စောင့်ဆိုင်းပြီး မှောင်ရိပ်ခိုကာ တိုက်ခိုက်သဖြင့် ဦးခေါင်းနောက်စီး ဒါဏ်ရာ နောက်ကျော့တွင် ဓါးခုတ် ဒါဏ်ရာဖြင့် ကလန်း ဆွေးရုံးကြီးတွင် ဆေးကုသမူခံယူခဲ့ရသည်
(၆) ဇူလိူင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အန်ပန်းမြို့နယ် အူလူလန်ကန်း ၁၄ မိုင်တွင် ကိုစိုးနှိင် ကိုမောင်စောအောင် (ခ) ကျော်သိန်း တို့ကို အကွက်ကျကျ စီစဉ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး တော့ထဲတွင် ပစ်ထားခဲ့သည် နှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်ခံရမူ
(၇) ဇူလိူင်လ ၂၈ ရက်နေ့က အီဂျိုးကော်လာဆလန်းဂေါ မှ ဘစ်ကားဖြင့် လိုက်ပါလာသော ကို တိုးဝေဖြိုးအား ဆုံဂိုင်း ဘလိုး အရောက်တွင် ရခိုင်များအား ရန်မူရန် ကြိုတင်စောင်ဆိုင်းနေသော လူတစ်စုမှ ကားထက်သို့ တက်လာပြီး ရခိုင် စကားပြောသံကို ကြားသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုး ဟု မေးမြန်းကာ ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိုက်ကြပြီး ကားထက်မှ ကားအောက်သို့ ဆွဲချစဉ် အတူလိုက်ပါလာသောခရီးသသည်များ ဝိုင်းဝန်းကူညီမူကြောင့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာခဲ့ရပါသည် ။
(၈) ၃.၈.၂၀၁၂ တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ ရခိုင်အမျိုးသားပိုင် မြန်မာ ဥယျာဉ် ဆိုင်ကို ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂလီ လူအုပ်စု ၅၀ ကျော်ခန့်က သာကြာနေ့ ညနေပိုင်း ၅နာရီခန့်တွင် ဗလီမှ အပြန် လမ်းတွင် ရခိုင်သား ၂ ဦးအားလိုက်လံရိုက်နက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ၄င်း မြန်မာဥယျဉ် ဆိုင်သို့ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်သွားခဲ့သည့် စသည့် အမူတွဲများကို UNHCR မှ ကိုယ်စားပြုရောက်ရှိလာသော တာဝန်ရှိသူများထံသို့ ရခိုင်အဖွဲအစည်းများမှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူမျာှး တင်ပြခဲ့ရာ ၄င်း UNHCR တာဝန်ရှိသူများမှ ယခုလိုမေးပါတယ်။ ပြီးသွားတဲ့ ဒီအမူတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ များရဲ့ လက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဘာကြောင့်ပြောနှိင်ရတာလဲ အခုလိုပြောပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ရခိုင်အဖွဲအစည်းများမှလည်း ပြီးသွားတဲ့ အမူများနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဇူလိူင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အန်ပန်းမြို့နယ် အူလူလန်ကန်း ၁၄ မိုင်တွင် ကိုစိုးနှိင် ကိုမောင်စောအောင် (ခ) ကျော်သိန်း တို့ကို အကွက်ကျကျ စီစဉ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး တောထဲတွင် ပစ်ထားခဲ့သည့် နှစ်လောင်းပြိုင်လူသတ်ခံရမူ တွင် ရိုဟင်ဂျာ အေးဂျင့် များခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် ဟု သက်သေခံအထောက်ထားအရ အထက်ပါအမူများကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထိုသို့တင်ပြခဲ့ပြီး ယခုလက်ရှိ အခြေအနေရ ရခိုင်အနည်းစု နေထိုင်ရာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရတဲ့ ရခိုင် လူမျိုးတွေအတွက်ပါစိုးရိမ်ပူပင်နေကြရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါဆက်လက်တင်ပြခဲ့သည်ဟုလည်းသိရှိရပါသည်။
UNHCR မှလည်း ယခုလို့ အကြမ်းဖက်မူများ ရှိခဲ့လျှင် UNHCR ရဲ့ OPI ဌာနသို့ ကာယကံ ရှင်ကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်)နီးစပ်သူတစ်ဦး မှ လာရောက်တိုင်ကြားနှိင်ကြောင်းလည်း ၄င်း UNHCR တာဝန်ရှိသူများမှ အကြုံပြု ပြောဆိုခဲ့သည် ဟုသတင်းရရှိပါသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 14, 2012, under သတင်းများ | No comments
သတ္တ၀ါတို့ ချမ်းသာသုခတိုးပွားများပြားရန်အတွက် ပြုလုပ်သင့်သော ကောင်းမူကုသိုလ်များ လုပ်ငန်းများသည် ပုညကြိယာဝတ္ထုမည်၏။ ထိုပုညကြိယာ ၀တ္ထုကား ဆယ်မျိုးရှိသည်။
(၁) ဒါန = စွန့်ကြဲ ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း၊
(၂) သီလ = ကာယကံ ၀စီကံ တို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်း၊
(၃) ဘာဝနာ = ဘုရားဂုဏ်စသည်ကို အာရုံပြုနေခြင်း၊ သမထ၀ိပဿနာ ဘာဝနာပွားများခြင်း၊
(၄) အပစာယန = ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း၊
(၅) ဝေယျာဝစ္စ = သူတပါးတို့၏ အပြစ်ကင်းသော ကိစ္စကြီးငယ်ကို ပြုစုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) ပတ္တိဒါန = မိမိပြုလုပ်သော ကုသိုလ်အဖို့ကို အမျှပေးဝေလျှင် ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ခြင်း၊
(၇) ပတ္တာနုမောဒန = သူတပါးတို့ ကုသိုလ် ကောင်းမူ ပြုသည်ကို အမျှပေးဝေလျှင် ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ခြင်း၊
(၈) ဓမ္မဿဝန = တရားဒေသနာကို ကောင်းစွာ နာယူခြင်း၊
(၉) ဓမ္မဒေသနာ = တရားဟောပြော ပြသခြင်း၊
(၁၀) ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ = ဖြောင့်မှန်သော အယူဝါဒရှိခြင်း၊ (ကံ – ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ခြင်း)။
စွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းသည် ဒါနမည်၏ ပုဗ္ဗ မုဉ္စ အပရ စေတနာသုံးတန်ပြည့်ဝစွာဖြင့် လှူဒါန်းခြင်း၊ မိမိစွန့်လှူသော ပစ္စည်းကို နှမြောတွယ်တာမူမရှိဘဲ အလောဘစိတ်ဖြင့် လှူဒါန်းခြင်း၊ ကမ္မဿကတာဉာဏ်နှင့် ယှဉ်၍ လှူဒါန်းခြင်းတို့သည် ဒါနအကျိုးတရား ပိုမိုပြည့်ဝသော လှူဒါန်းခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဒါနပြုလုပ်သဖြင့် သံသရာဝယ် ဘောဂသမ္ပတ္တိနှင့် ပြည့်စုံရသည်။
ကာယကံ ၀စီကံတို့ကို စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်သီလများ စောင့်ထိန်း ခြင်းသည် သီလမည်၏။ သီလ စောင့်ထိန်းသူသည် ကာယကံ ၀စီကံတို့ကို စောင့်ရှောက်ရသည်။ လူတို့အတွက် ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ အမြဲစောင့်ထိန်းရမည့် သီလမှာ ငါးပါးသီလဖြစ်သည်။ လူတိုင်းလိုက်နာ ကျင့်သုံးရမည့် ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းမွန်လုံခြုံရေး၊ လူတိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရား ပြည့်ဝရေးသည်လည်း အရေးပါလှသည်။ ကိုယ်ကျင့်သီလပြည့်စုံရန် လူတိုင်း စောင့်ထိန်းသင့်သည်။ အခြားသော ဥပုသ်သီလတို့မှာ စောင့်ထိန်းနိုင်လေ အကျိုးကြီးလေဖြစ်သည်။ ပြင်ပ ပစ္စည်းအလှူဒါနထက် ကိုယ်ကျင့်သီလတရားက ပိုမိုမြင့်မြတ်သည်။ သီလနှင့် ပြည့်စုံသူသည် သံသရာဝယ် ဘ၀သမ္ပတ္တိနှင့် ပြည့်စုံရသည်။
ဘုရားဂုဏ်စသည်ကို အာရုံပြုနေခြင်း၊ သမထ၀ိပဿနာ ဘာဝနာ ပွားများခြင်းသည် ဘာဝနာမည်၏။ ဘာဝနာကုသိုလ်သည် ဒါန သီလတို့ထက် ပိုမိုမြင့်မြတ်သည်။ မနောကံဖြင့် ပြုလုပ်ပွားများရသော အလုပ်ဖြစ်၍ စိတ်ဓာတ်တည်ကြည်ငြိမ်သက်ရန် လိုအပ်သည်။ ဘုရားပွင့်တော်မူရာ ဤအခါဝယ် ဗုဒ္ဓါနုဿတိဘာဝနာ၊ မေတ္တာဘာဝနာတို့ကို ပွားများရန် အဆင်ပြေနေကြသည်။ အာနာပါနဿတိစသော သမထဘာဝနာများကို ပွားများခြင်း၊ ဘုရားပွင့်လာရာအခါမှသာ ကြားနာသိရသော လွန်စွာတွေ့ကြုံခဲ့သည့် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ၀ိပဿနာရူပွားမူများကို ပြုလုပ်နေခြင်းသည် လွန်စွာ အကျိုးကြီးမားလှသည်။ နံ့သာတစ်ရှူ၊ နွားနို့တစ်ညှစ် လက်ဖျစ်တစ်တွက် အချိန်တိုလေးမျှ ပွားများသော ဘာဝနာကုသိုလ်သည်ပင် အချိန်များစွာ ပြုလုပ်သော ဒါန သီလတို့ထက် အကျိုးပေးကြီးသည်။ ဘုရားသာသနာတော်နှင့် တွေ့ကြုံရကျိုးနပ်လေအောင် သမထဘာဝနာအပြင် ၀ိပဿနာဘာဝနာကိုလည်း ကျိုးစားအားထုတ်ရပေမည်။
ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်းသည် အပစာယန မည်၏။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာသုံးပါး မိဘဆရာများနှင့် မိမိထက် အသက်သိက္ခာဂုဏ်ကြီးသူများ၊ တရားကျင့်ကြံနေသူများ၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာနှင့် တိုင်းပြည် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် စီမံဆောင်ရွက်နေသူများစသည်တို့သည် ရိုသေထိုက်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ကို ခရီးဦးကြိုဆိုခြင်း၊ လက်အုပ်ချီခြင်း၊ ရှိခိုးခြင်း၊ ငုံ့လျှိုကိုင်းရိူိင်းသွားလာခြင်း စသော ရိုသေမူတို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းသည် အပစာယန မည်၏။ အပစာယနတရားနှင့် ပြည့်စုံသူသည် ဤဘ၀တွင် လူတကာ၏ ချစ်ခင်ခြင်း၊ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းကို ရရှိပြီး နောင်တမလွန်၌လည်း သုဂတိဘုံသို့ ရောက်နိုင်လေသည်။
သူတပါးတို့၏ အပြစ်ကင်းသော ကိစ္စကြီးငယ်ကို ပြုစုဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် ဝေယျာဝစ္စမည်၏။ ရိုသေထိုက်သူတို့၏ ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်ကို ပြုစုဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း၏ အလုပ်ကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ခရီးသွားလာရာ၌ ကူညီယိုင်းပင်းခြင်း၊ အိုမင်းသူတို့ကို ဖေးမကူညီခြင်း၊ ကျောင်း အိမ် ရပ်ရွာ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရားစေတီ ဗောဓိပင်တို့ကို ရှင်းလင်းသန့်ရှင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ လူအများ ချမ်းသာစွာ သွားလာနေနိုင်ရေးအတွက် လမ်းပြင်ခြင်း၊ တံတားဆောက်ခြင်း၊ ရေချမ်းစင်တည်ထားခြင်း၊ တည်းခိုနားနေရာ ဆောက်လုပ်ခြင်း စသည်တို့သည် ဝေယျာဝစ္စမည်၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမူနှင့် စပ်လျဉ်းသော ထိုထို အမူကိစ္စ အမျိုးမျိုးတို့ကို ပကာသနမဖက် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သောစိတ်၊ အများလူတို့၏ အကျိုးလိုလားသော စိတ်ဖြင့် ကိုယ်ရော စိတ်ပါ အားထုတ်မူများပင် ဖြစ်လေသည်။
မိမိပြုလုပ်သော ကုသိုလ်အဖို့ကို အမျှပေးဝေခြင်းသည် ပတ္တိဒါန မည်၏။ မိမိရအပ်ပြီးသော ကုသိုလ်အဖို့ကို သူတပါးတို့အား မိမိနှင့်ထပ်တူ အကျိုးရစေရန် အမျှပေးဝေရသည်။ ဤသို့ အမျှပေးဝေလျှင် မိမိကုသိုလ်အဖို့ လျော့နည်း မသွားသည့်အပြင် အခြားသူများပါ မိမိကုသိုလ်၏ အကျိုးကို ရရှိနိုင်သဖြင့် ကုသိုလ်ကောင်းမူပြုလုပ်ပြီးတိုင်း မေတ္တာစေတနာဖြင့် အမျှပေးဝေရသည်။ ယမမင်းသည် ငရဲဘုံသို့ ရောက်လာသူအား သုဂတိဘုံသို့ ရောက်စေရန် ကုသိုလ်တရားတို့ကို စစ်မေးလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ယမမင်းအားလည်း အမျှဝေကြရသည်။ မိဘဘိုးဘွားကစ၍ (၃၁) ဘုံ ကျင်လည်ကုန်သော သတ္တ၀ါ ဝေနေယျအားလုံးတို့အား အမျှပေးဝေရသည်။
သူတပါးတို့က ကုသိုလ်ကောင်းမူအမျှပေးဝေလျှင် ၀မ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်ခြင်းသည် ပတ္တာနုမောဒနာမည်၏။ အမျှဝေမူ သာဓုခေါ်မူတို့သည် စိတ်စေတနာထက်သန်လျှင် ထက်သန်သလောက် အကျိုးပေးနိုင်သည်။ သာမန်ကိစ္စများမဟုတ်ကြပေ။ ဘ၀များစွာ ကောင်းကျိုး ပေးနိုင်ကြသည်။ သူတဦးကောင်းမူပြုလုပ်သည်ကို မိမိမပြုနိုင်သေးလျှင် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ရမည်။ ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးစွာ အားပေးထောက်ခံ သာဓုခေါ်မူကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံးတွင် ကုသိုလ်တရားတို့ တိုးပွားလာကြသည်။ အမျှဝေမူ သာဓုခေါ်မူသည် ဆီမီးတိုင်တစ်တိုင်မှ ဆီမီးများကို ပွားယူမူနှင့်တူသည်။ မိမိဆီမီးတိုင်တစ်တိုင်မှ အခြားသော ဆီမီးတိုင်ပေါင်းများစွာကို မျှဝေ ထွန်းညှိပေးသည်ရှိသော် မိမိဆီမီးတိုင်တွင်လည်း အလင်းရောင်မလျော့သလို အခြားဆီမီးတိုင် များလည်း အလင်းရောင် ကျယ်ပြန့်များပြား ထွန်းတောက်သွားကြသည်။ ဤအတူပင် အမျှဝေသူမှာ ကုသိုလ်လျော့မသွားဘဲ သာဓုခေါ်သူမှာ ကုသိုလ်အကျိုးပွားတိုး ခံစားရလေသည်။
တမလွန်ဘ၀ရောက်နေကြသော ပေတဂတိရရှိသူများသည် မိမိကို ရည်ညွှန်း၍ ပေးပို့သော အမျှဝေမူကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ရလျှင် ချက်ချင်းပင် အကျိုးပေးတတ်၏။ နတ်အမျိုးမျိုးနှင့် သူတပါးပေးကမ်းမူကို မှီ၍ အသက်မွေးကြရကုန်သော ပရဒတ္တူပဇီဝိပြိတ္တာ၊ ဝေမာနိကပြိတ္တာတို့သည် အမျှဝေမူကို သာဓုခေါ်ရလျှင် ချက်ချင်းပင် ချမ်းသာသုခရနိုင်ကြသည်။ တမလွန်ဘ၀ပြောင်းသူတို့အား အထူးရည်ညွန်း၍ အမျှဝေမူပြုလုပ်လျှင် အကျိုးထူးခံစားရကြောင်းဗိမ္ဗိသာမင်းနှင့် ပြိတ္တာဆွေမျိုးတို့ အကြောင်းက ပြဆိုနေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘ၀တပါးပြောင်းသွာားသူတို့အား အထူးရည်ညွှန်း၍ ကုသိုလ်ပြုကာ အမျှပေးဝေရမည်။
တရားဒေသနာတော်ကို ကောင်းစွာနာယူခြင်းသည် ဒမ္မဿဝနမည်၏။ လောကီလောကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသော တရားစကားများကို ယောနိသော မနသိကာရ စေတနာဖြင့် ကြားနာမူဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဘ၀သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော်များကို နာကြားမူသည်သာ တရားတော်နာကြားမူ အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်များကို ကြားနာမှတ်သားလိုက်နာရပေမည်။
တရားဟော ပြသခြင်းသည် ဓမ္မဒေသနာမည်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဒေသနာတော်တရားတော်များကို ယောနိသော မနသိကာရ စေတနာဖြင့် လာဘ်လာဘရရှိမူ နာမည်ကျော်ကြားမူ စသည်တို့ကို မငဲ့ဘဲ ဟောကြားပြသမူ၊ စာပေရေးသားဖြန့်ဖြူးမူ၊၊ စာပေပို့ချသင်ကြားပေးမူစသည့် သူတပါးတို့ကို အသိပညာပေးမူများသည် ဓမ္မဒေသနာမည်၏။ သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ ဟူသော ဒေသနာတော်အရ တရားဟောပြ ပို့ချသင်ကြားမူသည် အလှူတကာတို့တွင် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်၍ ကြိုးစားအားထုတ် ပြုလုပ်ရပေမည်။
ဖြောင့်မှန်သော အယူဝါဒရှိခြင်း။ ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မမည်၏။ အယူဖြောင့်မှန်ရေးသည် သတ္တ၀ါတိုင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အလှူ၏ အကျိုးသည် အမှန်ရှိ၏ စသည်ဖြင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရာ ဖြစ်ကြောင်း (၁၀)မျိုးကို ဖြောင့်မှန်စွာ ယုံကြည် သိမြင် လက်ခံကျင့်သုံးမူသည် ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ ဖြစ်၏။ ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ အယူဖြောင့်မှန်ရေးအတွက် သမ္မာဒိဋ္ဌိကဒသ၀တ္ထုခေါ် သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်း တရားဆယ်မျိုးတို့မှာ -
(၁) ပေးလှူရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးသည် အမှန်ရှိ၏ (တ္ထိဒိန္နံ)၊
(၂) ယဇ်ကြီး(အလှူကြီး) ပူဇော်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးသည် အမှန်ရှိ၏ (အတ္ထိ ဒိဋ္ဌံ)၊
(၃) ယဇ်ငယ်(အလှူငယ်) ပူဇော်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးသည် အမှန်ရှိ၏ (အတထိ ဟုတံ)၊
(၄) ကောင်းစွာပြုအပ်သော ကုသိုလ်ကံ၊ မကောင်းသဖြင့် ပြုအပ်သော အကုသိုလ်ကံတို့၏ အကျိုးဆက်(ဖလ) အကျိုးရင်း(၀ိပါက)သည် အမှန်ရှိ၏။(အတ္ထိ သုကတဒုက္ခဋာနံ ကမ္မာနံ ဖလံ ၀ိပါကော)၊
(၅) ဤလောကသည် အမှန်ရှိ၏ (အတ္ထိ အယံ လောကော)၊
(၆ ) တမလွန်လောကသည် အမှန်ရှိ၏ (အတ္ထိ ပရော လောကော)၊
(၇) အမိ၌ ကောင်းမွန်စွာပြုခြင်း၊ မကောင်းသဖြင့် ပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးသည် အမှန်ရှိ၏ (အတိမာတာ)၊
(၈) အဘ၌ ကောင်းမွန်စွာပြုခြင်း၊ မကောင်းသဖြင့် ပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးသည် အမှန်ရှိ၏ (အတ္ထိပိတာ)၊
(၉) သေ၍ တဖန်ဖြစ်ပြန်သော သတ္တ၀ါတို့သည် အမှန်ရှိကုန်၏ (သတ္ထိ သတ္တာ သြပပါတိကာ)၊
(၁၀) ဤလောကကို လည်းကောင်း၊ တမလွန်လောကကို လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင် ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိ၍ မျက်မှောက်ပြုကာ ဟောကြားနိုင်ကုန်သော ညီညွတ်ကုန်သော ကောင်းသော အကျင့်ရှိကုန်သော သမဏ ဗြဟ္မဏတို့သည် လောက၌ အမှန်ရှိကုန်၏(အတ္ထိ လောကေ သမဏာဗြဟ္မဏာ သမ္မဂ္ဂတာ သမ္မာ ပဋိပန္နာ) –
တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤသမ္မာဒိဋ္ဌိက ဒသ၀တ္ထုနှင့် ပြည့်စုံမှသာလျှင်သမ္မာဒိဋ္ဌိက အယူမှန်သူ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးသမီး စင်စစ်ဖြစ်နိုင်ကြသည်။
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ(၁၀)မျိုးမှလည်းကောင်း၊ ဣဿရနိမ္မနဒိဋ္ဌိ စသည်တို့မှ လည်းကောင်း၊ လောကီအယူအဆ ဗေဒင် ယတြာ လောကီဒိဋ္ဌမင်္ဂလာတို့မှ လည်းကောင်း လွတ်ကင်းစင်ကြယ်၍ ကံ – ကံ၏ အကျိုးကို ဖြောင့်မှန်စွာ ယုံကြည်သိမြင်ပြီး လောကသံသရာ နှစ်ဖြာကောင်းကျိုး ပွားတိုးစည်ပင်စေရန် ကုသိုလ်ကံတို့ကို အားထုတ်ပြုလုပ်ရပေမည်။ သတ္တ၀ါတိုင်းအတွက် ကမ္မဿကဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ် ကံ – ကံ၏အကျိုးကို အမှန်သိမြင်ရေးသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ အကျိုးအကြီးဆုံးလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုဉာဏ် အမြင်မှန်ဖြင့် ပြုလုပ်မှသာ အထက်တန်းကျသော ဘ၀သမ္ပတ္ထိ၊ ဘောဂသမ္ပတ္ထိနှင့် ဘ၀လွတ်ရာ နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်သည်။ အပြစ်ရှိသော အမူတို့တွင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ် အယူလွဲမှားမူသည် အပြစ်အကြီးဆုံးဖြစ်၍ နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ် ဘုရားချွတ်၍မျှ မကျွတ်သောသူများသည် သံသာရခါဏုကခေါ် သံသရာသစ်ငုတ်ကြီးများ ဖြစ်ကြရသည်။ အယူဖြောင့်မှန်သူဖြစ်ရန် အားထုတ်ကြရပေမည်။
(မှတ်ချက်။ ။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားတော် အခြေံခံအဆင့် စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြထားသည်။)
မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ညောင်ကွဲရပ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွား
မန္တလေး အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ညောင်ကွဲရပ် ယနေ့နံနက် ၈နာရီခွဲက ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အသက် ၃နှစ် ခွဲအရွယ်ကလေးတစ်ဦးနှင့် အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် အမျိုးသား တစ်ဦးတို့ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“ဖြစ်တာကတော့ မနက် ၈နာရီခွဲလောက်မှာဖြစ်တာ ၊မီးခိုးလုံးတွေမဲပြီးတော တတ်လာတယ် အသံလည်း တော်တော်ကျယ်တယ်၊ကားဘီးပေါက်တဲ့အသံထက်ကို ကျယ်တယ်၊ကျွန်တော်လည်းပထမတော့လန့်သွားတယ်”ဟု ၄င်းရပ်ကွက်နေ ဦးဝင်းညွန့် ကပြောသည်။ ၄င်းပေါက်ကွဲမှုသည် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော ကလေး၏ နေအိမ် ဘေးမြေကွက်လပ်တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။“ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကလေးကတော့ စိုးရိမ်စ ရာမရှိဘူးလို့ ကြားတာပဲ”ဟု၎င်း ကပြောသည်။ထို့အပြင် အဆိုပါ ကလေးမှာလည်ပင်းတစ်ချက်ပဲထိသည်ဟု ကြား ရကြောင်း နှင့် အမျိုးသားမှာ လက်ကောက်ဝတ်ထိသွားကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။အဆိုပါနေရာတွင် နေထိုင်သူ အများစုသည် မန္တလေးမြို့အနှံလျှောက်၍ပလတ်စတစ်များကောက်ကာပလတ်စတစ်များကိုဒိုင်တွင်ပြန်လည်ရောင်းချ ရန်အတွက် ဗူးခွံများ စုဆောင်းရာမှ ပေါက်ကွဲ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဒဏ်ရာရရှိသော ကလေးအား မန္တလေး မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင်ပို့ထားပြီးအဆိုပါ ပေါက်ကွဲမှုကို တာဝန်ရှိသူများမှ စစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
အမေရိကန်နှင့် ထိုင်းက မူးယစ်ရာဇာ များအဖြစ် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသော ၀ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရွက်ဆစ် ဘိန်းတိုက်ဖျက်ရေး ပူးပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုပဲ
မူးယစ်ဆေးဝါး ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဝ ပြည်ေ သွးစည်းညီညွ တ်ရေးတပ် ဖွဲ့ထံ သျှမ်းပြည် တပ်မတော်ေ ခါင်းဆောင် က ကမ်းလှမ်းလို က်ကြောင်း RCSS/SSA သတင်း ရပ် ကွက်ကဆို ပါသည်။ဝ ပြည်သွေး စည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့ UWSA ကလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးတို က်ဖျက်ဖို့ ကြေငြာ ထား တယ်၊ ပေါ်လစီရှိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွ က် ရှေ့ရေးအတွက်မျှော် မှန်းပြီး ကျနော်တို့တတွေ လက်တွဲ ပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရင် ပိုမိုအကျိုးသက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်” ဟု RCSS/SSA ခေါင်းဆောင်ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်က ပြောသည်။
ပန်ဆန်းဌာနချုပ်ရှိ WSA သည် အစိုးရ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပေါ်လစီကိုထောက်ခံသကဲ့သို့ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ် ငန်းကိုလည်း တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်လာသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ လက်တွဲပူးပေါင်းကာ အစိုးရ၏မူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်း၌ တတပ်တအားပါဝင်ကူညီသင့်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှသိမြင်လာစေရန်လက်တွေ့အကောင် အထည်ဖော်ပြမှသာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်နှင့်ထိုင်းတို့မှ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားေ သာပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ပြစ်ဒဏ် မှ လျော့ကျသွားလိမ့်မည်ဟုယူ ဆကြောင်း ဥက္ကဌကြီးယွက်စစ်က၎င်းတို့ပိုင်သောတိုင်းဖှရီးဒမ်းဝဲပ်ဆိုဒ်၌ပြောကြားသည်။
“အခုလိုအခွင့်သာတုန်းမှာ ကျနော်တို့ လုပ်သင့်တယ်။ အခွင့်အရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံသင့်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခွင့် အရေးက ၂ ခါမလာတတ်ဘူး” ဟုလည်း ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောပြသည်။
ဝပည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ အကြီးအကဲမျာြး ဖစ်သော ဝေ့ရှော်က န်း၊ ပေါင်းယိုချမ်း၊ ပေါင်းယို ယီး ၊ ပေါင်းယို လျန် ၊ ပေါင်းယိုဟွာ၊ ဝေရှောက်လုံ၊ ဝေရှောက်ယွင်၊ ပေါင်းဟွာချမ် အစရှိသူတို့အား ၂၀၀၅ ခုနှစ်က အမေရိကန်က မူးယစ်ဆေးဝါး ကူးသန်းမှုနှင့်စွဲချက်တင်ထားသည်။ ဝေရှော်ကန်း ကိုမူ ၁၉၉၈ ကတည်းက ဒေါ်လာ ၂ သန်းဆုကြေးဖြင့် ဖမ်းမိန့်ထုတ်ခဲ့ဖူး၏။ ထို့အတွက်ကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးတွင် လက်တွဲဖေါ်ဆောင်ပါက ဝေရှော်ကန်းအနေဖြင့် အနောက်နိုင်ငံချမှတ် ထားသော ပစ်ဒဏ်ပြေလျှော့သွားနိုင်သည်ဟု ဥက္ကဌကြီးယွက်စစ်က ယုံကြည်ပါသည်။
UWSA ၏ အမှတ် ၁၇၁ စစ်ဒေသ တောင်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဝေ့ရှော်ကန်းသည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ခွန်ဆာဦးဆောင် သော တပ်ဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ကာ (Wa National Council ) ကိုတည်ထောင်ခဲ့၏။ ၁၉၈၉ တွင်ဝ ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး တပ်မတော် UWSA နှင့် ပူးပေါင်း ၏။ UWSA မှာမူ မြန်မာအစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်က သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ဌာနချုပ် လွယ်တိုင်းလျဲန်းအား တလကျော်ကြာ တိုက်ခိုက်ခဲ့၏။ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူပေါက်ယူချမ်းက အဆိုပါတိုက် ပွဲသည်နှစ်ဘက်လုံးအတွက် အကျိုးမရှိဟုဆိုကာ ရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခု သျှမ်းပြည်တပ်မတော်က အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်နေသောကြောင့် ဝ ပြည် သွေးစည်းညီညွတ် ရေးတပ်မတော်က - RCSS/SSA သည် မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့်ပူးပေါင်း၍ မိမိတို့အား ပြန်လည် ရန်ရှာတိုက်ခိုက်လာနိုင်သည် ဟူသည့် သံသယရှိနေသည့်အပေါ် RCSS/SSA ခေါင်းဆောင် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယွက်စစ်က- “ဝ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော် က တဖက်သတ်စိုးရိမ်ပူပန်နေတာဘဲဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က UWSA ကို တိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မစဉ်းစားဘူး။ ပေါ်လစီလဲ မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ တမြေတည်းနေ တရေ ထဲသောက်လာကြတဲ့ ညီရင်းအစ်ကိုတွေဖြစ်နေလို့ဘဲ။ မူးယစ် ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးစီမံကိန်းဟာလည်း နယ်မြေ ဖွံ့ဖြိုးရေးတည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းတွေ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်း ပြီးမှ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ့် စီမံကိန်းဖြစ်တယ်”ဟုပြောသည်။
မိုင်းတုံမြို့နယ် ပုံဖာ-ပုံတောင်းဒေသဖက်၌ ဒုက္ခသည်များဝမ်းရေးအတွက် ယာခင်းလုပ်ရန်သွားသည့် ဒုက္ခသည် ၁၀ယောက် ကျော် နှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အချို့အား နယ်မြေကျူးကျော်မှုဟု စွပ်စွဲကာ UWSA က ဖမ်းဆီးထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပိုင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် သျှမ်းပြည်တပ်မတော်က ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ကြိမ် စေလွှတ်ခဲ့သော်လည်း လက်ခံဖြေရှင်းခြင်းမရှိ ၊ ဝ တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကျောက်ကျုံးတန်းကမူ ဆွေးနွေးဖြေရှင်းရန်အတွက် SSA မှ အဆင့် အမြင့်ကိုယ်စားလှယ်များ စေလွှတ်ရန် အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟုလည်း သျှမ်းပြည် တပ်မတော် က ပြောသည်။
ဤအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ SSA ဘက်မှ ပြောပြသည်မှာ- (၁) စေလွှတ်သွားသောကိုယ်စားလှယ်များမှာ ဗဟိုကော်မတီ ဝင်အဆင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ (၂) တဦးမှာ ခရိုင်အဆင့် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး နှင့် စစ်ရေးအရ စကခ ၁၄ အတွက် ဆက်ဆံရေး အရာရှိဖြစ်ကြောင်း၊ (၃) အဆင့်မြင့်အရာရှိများအား ၂၀၀၉ ကတည်းက ဝ မြို့တော်ပန် ဆန်းသို့အကြိမ် ကြိမ်စေ လွှတ်ခဲ့သည်သာမကစာဖြင့်လည်းအကြိမ်ကြိမ်ရေးသားပေးပို့ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါသည်။
“UWSA နှင့် SSA တို့အကြားလူမျိုးရေးပြဿနာလည်းမရှိ၊MTA ခေတ်ကကဲ့သို့ စီးပွါးရေးအရ ဈေးကွက်လုပြဿနာလည်း မရှိခဲ့၊ ယခုဖြစ်ရသည်မှာ လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များမှ အစီရင်ခံမှုကို သေချာစွာစီစစ်ခြင်းမရှိသည့် အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည်”ဟုဥက္ကဌကြီးယွက်စစ်ကဆိုပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကလည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ မူး ယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးအောင်မြင်ရမည်ဟုကြေငြာထားသည်။
From - ရှမ်းသံတော်ဆင့်
ဘယ်သူ့ကိုလာဘ်ပေးရလဲ တိတိကျကျပြော အရေးယူမယ်
ယခုအခါ နိုင်ငံတော်တရား စီရင်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပုဂ်္ဂိုလ်များရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ၊ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တန် ဖိုးနှင့် တကွ စာရင်းပြု စုပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတထံပေးပို့ရမယ်လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ်္ဂိုလ် အသီးသီး ထံ ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ နေ ပည်တော် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမတွင် မီဒီယာတွေ့ဆုံ ပွဲ၌စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနြ ပည်ေ ထာင်စု ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ““ဘယ်သူ့ကို လာဘ်ပေး ရတယ်ဆိုတာ တိတိကျ ကျပြော၊သိပ်တိကျရင်မနက် ဖြန်ကျွန်တော်အရေးယူမယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလာဘ်ပေးရတယ် ဆိုရင် လည်းကျွန် တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် အရေးယူမယ်။မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာ မှန်ကန်ရင် ကူညီကြ ပါ။အာပေး ကြပါမှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းတည့် မတ်ပေးကြပါ။ဒါပေမမဲ့ ကျွန်တော် တို့လာဘ်စားနေတယ်လို့တော့ ရမ်းမ လုပ်လိုက်ကြပါနဲ့။ကျွန်တော် လာဘ်ယူရင် ကျွန်တော်ထွက်ပါ မယ်။ဒီလိုပဲ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ၀န်ကြီး တွေ၊ကျွန် တော့ အဖွဲ့သား တွေလာဘ်ယူရင်လည်းအရေးယူဖို့ အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကို တင်ပြသွားမှာပါ။””ဟု ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြော ကြားသွာသည်။
ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦစိုးသိန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အချိန်မရွေးပေး နိုင်ကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦး အောင်မင်း ၊၊ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးခင်ရီတို့ကလည်း မိမိတို လာဘ်စားမိပါက မိမိတို့ကိုယ်တို င်နှုတ်ထွက်သွား မည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့်အပေါ် ပြည်သူ လူထုက အလွန်သဘော ကျနှစ် ခြိုက်ခဲ့ ကြောင်း လည်းသိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် လွယ်ဂျယ်မြို့ စည်ပင်သာယာရုံးအတွင်း မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ်လွယ်ဂျယ်မြို့ ရပ်ကွက်(၁)အောင် မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာ ရှိ တဲ့ စည်ပင်သာယာ ရုံးဝင်းအတွင်း သြဂုတ်လ(၁ ၂) ရက်ေ န့ မနက်(၁) နာရီချိန်ခန့်မှာ မိုင်းေ ပါက်ကွဲမှုဖြစ် ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ စည် ပင် သာယာရေးရုံးဝင်အတွင်းမှ အမှုဆောင်အရာရှိ ဦးစောသီ ဟနဲ့ အင်ဂျင် နီယာ ဦးမိုင်ယာ ယ်တို့ (၂)ဦးဟာ မြစ်ကြီးနားကို အစည်းအဝေးတ က်ေ ရာက်ဖို့ သွားနေချိ န်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။``အိမ်ကို မနေ့ည(၈)နာရီလောက်က လူ(၂)ယောက်
လာ သွားတယ် တစ်ယောက်အိမ်ထဲဝင်လာပြီး တစ်ယောက်က ခြံဝမှာစောင့်နေတယ။် ပြီးတော့ ကျွန်မအမျိုးသားနဲ့ သိတယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ(၂၀၀၀၀)ချေးတယ်။ သူတို့က ကားပျက်လို့ချေးတာပါတဲ့။ ကျွန်မကလည်း သူတို့ကိုမသိတော့ အမျိုးသားက မြစ်ကြီးနားသွားတယ်လို့ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ကလဲ ၀န်ထမ်းဖြစ်တာကြောင့် မချေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ ပြန်ထွက်သွားတယ်။ မနက်(၁) နာရီလောက်ကျတော့ ပေါက်ကွဲသံကြားရတာပါဘဲ။´´ လို့ အမှုဆောင်အရာရှိ ဦးစောသီဟရဲ့ဇနီးဒေါ်ချိုချိုဋ္ဌေးကပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက် လူ၊ အဆောက်အဦ ထိခိုက် ပျက်ဆီးမှုမရှိဘဲ အကျယ်(၈)လက်မ၊ အနက် (၄)လက်မခန့် ကျင်းတစ်ကျင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး၊ လုပ်ငန်းသုံး ထွေလာဂျီ(လေးလုံးထိုး) ယာဉ်တစ်စီး လေကာမှန် ကွဲအက်သွားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
From -ကချင်နေ့စဉ်သတင်း Facebook
လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ သြဂုတ်လကုန်တွင် ခေတ္တရပ်နားမည်
ယခုကျင်းပလျှက်ရှိသော စတုတ္တအကြိမ် လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကို သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ရပ်နား မည်ဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာ သို့မဟုတ် နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းတွင် ပြန်လည်ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် VOA သတင်းထောက်နှင် တွေ့ဆုံနေ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတြ မန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား အမေရိက န်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန် အခြေစိုက် အမေရိကား အသံ (VOA)မှ မြန်မာပိုင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက ယနေ့ သြဂုတ် ၁၃ရက် ညနေပိုင်းတွင် အင်တာဗျုးေ တွ့ ဆုံမေးမြန်း လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အ စည်းတွေ အကြား စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန် ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အဖြေရှာတဲ့ ဆွေနွေးပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန် ဆုံး တည် ဆောက်နိုင်ဖို့ အဖြေရှာတဲ့ ဆွေနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ ပန်ဒါဟိုတယ်မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း က ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေ နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရေ တွ့ ဆုံေ ဆွးနွေး ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပြီး (၂၀၁၅)ခုနှစ် မတိုင်ခင် ရလဒ်အဖြေတစ်ခုရရှိအောင် ကြိုးပမ်းေ ဆာင်ရွက်သွား လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း မြန်မာ အီး ဂရက် အဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်သန်း က ဆွေးနွေးပွဲ မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ အခမ်းအနားဟာ ကချင်ဒေသအတွက်သာမက တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဖြေရှာဖို့ ရည်ရွယ် ကျင်းပခဲ့တာလို့ အခမ်းအနားစီစဉ်တဲ့ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဂျာနန်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်းက ဦးဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး၊ (၂)ရက်ကြာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနော်ဝေသံရုံး ဒုတိယအကြီးအကဲ Mr.Arne Jan Flolo ၊ TransNational Institute က Mr.Tom Kramer ၊ မြန်မာအီးဂရက်ဥက္ကဌဦးတင်မောင်သန်း စတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဦးဆောင်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲကို တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း (၅၇)ဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအ၀င် ဆွေးနွေငြိမ်း ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့စည်းအသီးသီးက ပုဂ္ဂိုလ် (၂၀၀) လောက် တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် (၆) ဆန္ဒလာပြ
သာသနာရေး ဦးစီးဋ္ဌာနက ဟဂ်ျလုပ်ငန်း ၁၀ ဦးကော်မတီဟု ခေါ်ဝေါ်သည့် ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခုကိုသာ နှစ်စဉ် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးသည့်အပေါ် မကျေနပ်သဖြင့် သာသနာရေး ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးအား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အချို့ က ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့ကြသည်။
ဟဂ်ျ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်အတွက် ဆော်ဒီ ဗီဇာရယူခွင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေး ဦးစီးဋ္ဌာနက အသိ အမှတ်ပြုထားသည့် ၁၀ ဦးကော်မတီကသာ ရယူပေးခွင့်ရှိပြီး ယင်းသို့ဗီဇာ ရယူပေးခြင်း အတွက် ငွေကြေး ပေးနေရခြင်းနှင့် ဘုရားဖူးများ ဗီဇာမရသည့် အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်သူများ ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းဗီဇာရယူခွင့်ကို ၁၀ ဦးကော်မတီ လက်ထဲမှ အစ္စလာမ်သာသနာရေး ခေါင်းဆောင်များ လက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် ယနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ကမ္ဘာအေး သာသနာရေး ဦးစီးဋ္ဌာနတွင် သွားရောက်ညှိနှိုင်းသော်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်ရာမှ ယခုကဲ့သို့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရိုဟင်ဂျာ များအတွက် ဆော်ဒီဘုရင်က ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ထောက်ပံ့
လွန်ခဲ့သော ဇွန်လက မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာများကို ဆော် ဒီအာ ရေးဗီးယားဘုရင် အဗဒူလာက အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း၅၀ လှုဒါန်းလိုက်ကြောင်း ဆော်ဒီအာရေဗီးယား နိုင်ငံပိုင် သတင်းမီဒီယာတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ပဋိပက္ခတွင် ဒုက္ခ ခံစားခဲ့ရသော ရိုဟင်ဂျာများ အတွက်လည်း အရေးပေါ် အကူအညီ ပေးမည်ဟု ယူအေအီး သမ္မတ ရှိတ်ခါလီဖာအယ်လ်နာယန်က လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ ပေးနေသော အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော ခါလီဖာဘင်ဇာယစ်အယ်လနာယန် အဖွဲ့ကို ညွှန်ကြား လိုက်ကြောင်း ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှ လွှင့်တင်သော International News သတင်းဝက်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, August 14, 2012, under | No comments
ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ အစည်းအဝေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ကျွန်တော်တို့ ချမှတ်ခဲ့ကြတဲ့ Reform Stretegy နဲ့ပတ်သက်ပြီး မြို့ပြနဲ့ ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ထိထိရောက်ရောက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရန် အခြေခံ လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ City Plan ၊ Town Plan နဲ့ Village Planတို့ ရေး ဆွဲရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မန္တလေးမြို့ တို့ရဲ့ CityPlan များကို လေ့လာ ဆွေးနွေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ပြနဲ့ကျေးလက်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲရာမှာ ပြည်သူဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်သူများရဲ့ အဆင့် အတန်းရှိစွာ နေထိုင်နိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး လုံလောက်စွာရရှိရေး၊ သန့်ရှင်းတဲ့သောက်သုံးရေရရှိရေး၊ သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရေးစတဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့ လို အပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဟာ အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖြစ်သကဲ့သို့ အနာဂတ်မှာ မြို့ပြများရဲ့ စနစ်ကျနမှုနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာလည်း များစွာအရေးပါလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၅၂.၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ မြို့ပြမှာနေထိုင်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့ လူဦးရေ သန်း (၆၀၀) ရှိတဲ့အနက် မြို့ပြမှာနေထိုင်သူဟာ ၄၄.၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မြို့ပြ မှာနေထိုင်သူဟာ၃၂.၆ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ဟာ တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ ရေဆိပ်၊ အထက် အောက် ထွက်ကုန်ဆုံတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ မောင်းနှင်အားတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အာရှဒေသရဲ့ အဆင့်အတန်းမီ မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာများစွာ ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်ကဆိုရင်အာရှမှာစံထားရတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ မန္တလေးမြို့ဟာဆိုရင်လည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ဗဟိုချက်မမှာ တည်ရှိပြီး တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံတို့နဲ့ ကုန်သွယ်မှုအချက်အခြာကျတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေး နှစ်ရပ်ပေါင်းဟာ လူဦးရေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပြီး တစ်မျိုးသားလုံး အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးရဲ့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတဲ့အတွက် ဒီမြို့ကြီး နှစ်မြို့ကို စံနမူနာထားပြီး ကျန်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီးများနဲ့ ပြည်နယ်များရှိ မြို့များကိုလည်း မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နဲ့ညီအောင် ယခုကတည်းက မြို့ပြစီမံချက်များရေးဆွဲပြီး အနာဂတ်အတွက် မျှော် မှန်းတည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဒီမြို့ကြီးနှစ်မြို့မှာ ဒီကနေ့ လျှပ်စစ်မီး မလုံလောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ မလုံလောက်မှု၊ ရေဆိုးစွန့်ထုတ်စနစ် မပြည့်စုံမှု၊ နေထိုင်သွားလာရေး အဆင်မပြေမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် လေထုညစ်ညမ်းမှု စတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီပြဿနာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက် ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာမှာ ကိုယ့်ခွန်ကိုယ့်အားနဲ့တင် မရနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ အရင်းအနှီး လိုအပ်ချက်၊ နည်းပညာလိုအပ်ချက်နဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ ပြည်ပကသက်သာသော ချေးငွေတွေ၊ အထောက်အပံ့ငွေတွေ၊ လူ့စွမ်း အားမြှင့်တင်ပေးမည့်သင်တန်းအကူအညီတွေရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုရယူနိုင်ဖို့အတွက် ဒီကနေ့ အရှေ့အနောက်မခွဲခြားတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ကျွန်တော်တို့ ထူထောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီးတစ်ရွာကဲ့သို့ ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်တစ်နိုင်ငံတည်း ထီးတည်း နေလို့မရတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ နိုင်ငံအားလုံးနဲ့ သင့်တင့်အောင် လိုက်လျောညီထွေ ဆက်ဆံနေရပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆက်ဆံနေတာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့လည်း ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကို သတိထားပြီး ဆက်ဆံနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆက်ဆံခဲ့မှုကြောင့် ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်ကတော့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တင့်တယ်လာယုံသာမက အလေးထားလေးစားခံရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။
မြို့ပြများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး မြို့နေပြည်သူများရဲ့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ဖြစ်ရေး၊ စက်မှုကိုအခြေခံတဲ့ အသေးစား၊ အလတ်စား စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ထူထောင်ရေး၊ လူများများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရနိုင်တဲ့ သဘာ ဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်သော အလုပ်ရုံစက်ရုံများထူထောင်ရေး၊ မြို့ပြအိမ်ယာများ တည်ဆောက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအပါအဝင် မြို့ပြအင်္ဂါရပ်နဲ့ညီအောင် ဒေသခံအစိုးရနဲ့ပြည်သူလူထု အကြား ညှိနှိုင်းမှုပုံစံများဖြင့် မူဝါဒများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသန္တရ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်မှာ မြူနီစီပယ်အဖွဲ့အစည်းကို ပြည်သူများရွေးချယ်ပေးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အများစုနဲ့ စနစ်တကျ အမြန်ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ မြူနီစီပယ်အက်ဥပဒေကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတို့မှ ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာစီမံချက်များ အမြန်ရေးဆွဲကြရန် ပြောကြား ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ ကျေးရွာမှ မြို့ပေါ်တက်သည့်လမ်းများ သွားလာဆက်သွယ်မှု လွယ်ကူအောင် အသစ် ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လမ်းဟောင်းကို ပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်၊ ကျေးလက်စီးပွားရေးသည် လယ်ယာကုန်ထုတ် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးအပေါ် အခြေခံတဲ့အတွက် လယ်ယာမြေစာရင်းများ၊ လယ်မဲ့ယာမဲ့စာရင်းများ၊ အမှန်တကယ် မလုပ်ဘဲပစ်ထားသည့် လယ်ပျက်၊ ယာပျက်စာရင်းများ၊ အလုပ်လက်မဲ့စာရင်း များကို အမြန်ဆုံးကောက်ယူပြီး ကိုယ့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကိုယ့်မြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့အား တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံစေပြီး စီမံချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်များအား ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ ဘက် ဂျက်ခွဲဝေပေးခြင်း၊ ကိုယ့်ဒေသအတွင်း အခွန်အခများကောက်ခံခြင်းတို့ အပြင်၊ ပြည်ပမှ ရရှိမည့်ချေးငွေနဲ့ အကူအညီ ပေးငွေများကိုလည်း တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် အချိုးကျခွဲဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလည်း မျှမျှတတဖြစ်အောင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ စီမံဆောင်ရွက် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ့်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ့်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူပြီး အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုလည်း ဥပဒေနဲ့အညီ အရည်အချင်းရှိသူ၊ အဂတိ တရားကင်းရှင်းသူ၊ ရပ်ရွာအကျိုးကို အမှန်တကယ်ဆောင်ရွက်လိုသူများကို စနစ်တကျ အောက်ခြေမှ ရွေးချယ်ပေးစေပြီး ကိုယ့်ကျေးရွာဘက်စုံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အကူအညီကိုရယူပြီး ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ခိုင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးရွာများရဲ့ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တို့အပြင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပါ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်သွားစေရန် ဖြစ်ပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှုဟာ အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်မှာ နေရာတိုင်းလိုလို ရှိနေသေးတဲ့အတွက် တာဝန်ရှိ သူအဆင့်ဆင့်တို့မှ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုဟာ ပေးသူရော ယူသူပါ အကျင့်ပျက်တဲ့ သိက္ခာမဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အပြင် အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ထိထိရောက်ရောက် အပြစ်ပေး အရေးယူခြင်းများဖြင့် တားဆီးသွားကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် ဖြစ်ရေးအတွက် စွန်းထင်းနေတဲ့ ဒီအမဲစက်ကို မိမိတို့အစွမ်းကုန်ချေဖျက် သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အောက်ခြေကဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ်၊ လုပ်သမျှ အားလုံးဟာ အထက်အကြီးအကဲမှာသာ တာဝန် ရှိတယ်လို့ခံယူပြီး ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ ထပ်မံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ဒေသအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ခွဲဝေဆောင်ရွက်ရာမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းလုံခြုံရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာ အဓိက လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဒေသအလိုက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိအောင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းလုံခြုံအောင်၊ တရား ဥပဒေစိုးမိုးအောင်၊ ဥပဒေများနဲ့အညီ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်သွားကြရန်နှင့် ခေတ်စနစ်နဲ့အညီ လူမျိုးစုတစ်စုနဲ့တစ်စု သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ အတူတကွ ပူးပေါင်းနေထိုင်ရေး၊ လူမျိုးဘာသာ၊ ယောက်ျားမိန်းမ မခွဲခြားဘဲ လူ့အခွင့် အရေးများကို နယ်ပယ်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ လေးစားလိုက်နာရေးတို့ကိုအထူးအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မန္တလေးမြို့တို့ရဲ့ City Plan ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များကို လေ့လာပြီး မိမိတို့ဒေသရှိ မြို့များ၊ ကျေးရွာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားကြရန် ဖြစ်ပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ၊ သတင်းများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနမှ လွှင့်တင်ပေးထားသည့် http://www.rrdmyanmar.org ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းက လွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကယ် ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အကြောင်းတွေ၊ အရင် ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေးဘေး၊ လေဘေး၊ မီးဘေးအစရှိတဲ့ သဘာဝအန္တရာယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိနိုင်အောင် တင်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဌာနက သတင်းတွေကိုလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင် ပေးထားပါတယ်” ဟု ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးအေးမင်းသူက ပြောသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်ပါက လုပ်ဆောင်ရမည့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူထံသို့ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစရှိသည့် ဝင်ကြီးဌာနများ အပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနပေါင်း ၁၄ ခု၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာများကိုလည်း ဖော် ပြပေးထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ် Internet ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၁၃)၊ အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေကို ၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၈ ရက်၊ (၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်) နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ဤဥပဒေကို အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။ ဤဥပဒေတွင် ပါရှိသော- (က) “ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့” ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ (ခ) “ဝန်ကြီးဌာန” ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ စီမံခန့်ခွဲရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုခုကို ဆိုသည်။ (ဂ) “အရေးကြီးကုန်စည်” ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုခုက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော သက်ရှိကုန်စည် သို့မဟုတ် သက်မဲ့ကုန်စည် တစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။ (ဃ) “အရေးကြီး ဝန်ဆောင်မှု” ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုခုက အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။ စသည့်စကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြဋ္ဌာန်းချက်အပြည်အစုံအား ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာနှင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတို့တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
လုံ...မ ကောင်းမယ် လုံမငယ်
From :အရှင်ပညာဝံသ (ဥပဒေ)/ B.A 1st year (S.B.A)ရွှေမဂ္ဂင် စာသင်တိုက် ၊ မန်းတောင်ခြေ။
လှလိုက်တဲ့ မြန်မာစာလုံးလေးဗျာ `` လုံမ ´´ တဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြည့်စုံပြီးတော့ ကျက်သရေရှိလိုက်တာ။ ရှေးက စကားလုံးကို သုံးသွားတဲ့သူများ ဘယ်လောက်တော်ကြသလဲဗျာ။အခုခေတ်တော့ အခေါ်ဝေါ်လေးတွေက ပြောင်းသွားပြီလေ။ ယောက်ျာ လေးတွေက မိန်းကလေးများ သုံးနှုံးကြတာ `` ဆော် ´´တဲ့။အတိတ် နိမိတ် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ။
ဒါကြောင့် မို့လားမသိ နိုင်ငံ အချင်းချင်း ဆော်လိုက်ကြ။ လူမျိုး အချင်းချင်းလဲ ဆော်လိုက်ကြ။ ဆော် လို့ကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ သွေးမြေကျမှုတွေ များများလာတယ်နော်။ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်တော့ သွေးမြေကျမှု နှစ် ၂၅၀၀ ကျော်လာပြီ မရှိသေးပါဘူး။့ ဂုဏ်ယူစရာလေး တစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒို့ဘုရားက ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ ဖြစ်လို့မို့လေ။
အဲ sorry .. ပါ လိုရင်းကို မေ၇ာက်နိုင်ဘူး ။ဒီတော့ `` လုံခြုံ အောင်ဝတ်စားတတ်တဲ့ မိန်းမ မို့လို့ လုံမ ´´ ဒီလိုလေး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ချင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းအယူအဆ ပြောတာပါလက္ခံ သင့် ၊ မသင့် ကိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်လေးနဲ့ စိစစ် ဝေဖန်ပေးကြပါ။
ဟုတ်ပြီ ဒီတော့ မလုံတလုံ ၀တ်စားနေကြတဲ့ ခေတ်သစ် ညီမလေးများ ၊ မမများဟာ ခေတ်မှီဖို့ ၀တ်ကြတာလား ?
လုံအောင် ၀တ်ရမှာ ကြောက်လို့ ၀တ်ကြတာလား ? ဆင်းရဲလို့ အလျားပြည့် အနံပြည့် မ၀တ်နိုင်ကြတာလား ? ဆိုတာတော့ မေးမကြည့်မိဘူး။အကြောင်းတစ်ခုခု တော့ သူတို့ ဆီမှာ ၇ှိကြပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ မလုံ မှ တော့ ပေါ်မှာပေါ့ ။ပေါ်တော့ ဘာဖြစ်လဲ .... မြင်ကြမှာပေါ့။ကတ်တဲ့လူတွေက တော့ ပြောကြပါလိမ့်မယ် `` အမလေး မကြည့်ရင်ရင် မမြင်ပါဘူး ´´ ။ဟုတ်တာပေါ့ မျက်စိရှေ့တည့်တည့်တိုးပေမယ့် မျက်နှာလွှဲတဲ့သူက လွှဲလိမ့်မယ်။
မလွှဲနိုင်သူက ချောင်းကြည့်မယ်။ ဒီထက် ပိုတဲ့လူများက ဓာတ်ပုံတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပစ်ကြတယ်လေ။အဲ according to Buddhism ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်ကကြည့်မယ် ဆို၇င်လဲလူတွေ မှာ ဒီ ဟိရိ နဲ့ သြတ္တပ္ပ ဆိုတဲ့ မကောင်းမှု လုပ်ရမှာ ကို ရှက်ခြင်း နဲ့ ကြောက်ခြင်း ကင်းမဲ့လာပြီဆို လောကကြီး ပျက်ဆီးတော့မှာပါတဲ့။ဒါ့ကြောင့် ဒီနှစ်ခုကို ကမ္ဘာစောင့် တရား နှစ်ပါးလို့ ခေါ်တာပါ။ဒါဖြင့် ဒီလို ၀တ်စားဆင်ယင်မှု ဟာ မကောင်းမှု ထဲ သွင်းလို့ရသလား ?
တစ်ဆင့်ချင်း( step by step) စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်...မိမိ ဒါမျိုး ပြုမှု လိုက်တဲ့ အတွက် မိမိ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်(gender)တစ်ဦးမှာ
မိမိ အတွက် နှင့် သူတစ်ပါး အကုသိုလ် ဖြစ်မယ်ဆိုရင်။ မိမိကိုယ်ကို အပြစ်ကင်းတယ်လို့ ယူဆသလား ?
အကုသိုလ် မဖြစ်လို့ ယူဆပါသလား ? ယူဆရင် လွဲသွားမယ်နော်။ဒီစကားတွေက မိမိမြန်မာနိုင်ငံသူများသာ ပြောသင့်လို့ပြောတာပါ။ တခြားမှာ ပြောလို့မရဘူးလေ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့သူတို့က ကုသိုလ် ဆို I don't know ၊ အကုသိုလ် ဆို I don't know ကိုး...ကဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ အပ်ချိတ်နဲ့ လိုက်ပြီး ဖာထေးမပေးနိုင်လို့ ဖတ်သွားမိသူများ ယူတတ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းသြော်လုံ...မတော်မယ်လုံမငယ်။လုံ...မတော်မယ်လုံမငယ်။
လျှပ်စစ်မီးသတင်း အထောက်အထား မှန်ကန် ခိုင်လုံဟု 7Day ပြော
လူကြိုက်များသော ဂျာနယ်တခုဖြစ်သည့် 7Day တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် လျှပ်စစ်မီးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်း တပုဒ်ကို မမှန်မကန် မှားယွင်းဖော်ပြ သည်ဆိုသည့် ကုမ္ပဏီတခု၏ စွပ်စွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ တင်ပြသည့် သတင်းမှာ အထောက် အထား ပြည့်စုံပြီး မှန်ကန်၊ ခိုင်လုံ မှုရှိသည်ဟု ဂျာနယ် တာဝန်ရှိသူ တဦးက တုန့်ပြန် ပြောဆိုလိုက်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ (ဒုတိယအြ...
ထိုင်းဘုရင်မ မွေးနေ့အမှတ်တရ ကရင်နီဒုက္ခသည်တွေ သစ်ပင...
မီဒီယာတွေကို အရေးယူဖို့ သံတမန်တွေကို သတင်းစာရှင်းလ...
သဘာဝအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ...
မလေး ရှား မှရိုဟင် ဂျာ များ ၏ယု တ်မာ မှု များ (မလေး...
အမေရိကန်နှင့် ထိုင်းက မူးယစ်ရာဇာ များအဖြစ် ဖမ်းဝရမ...
ကချင်ပြည်နယ် လွယ်ဂျယ်မြို့ စည်ပင်သာယာရုံးအတွင်း မု...
အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အ စည်းတေ...
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို အစ္စလာမ်ဘာ...
ရိုဟင်ဂျာ များအတွက် ဆော်ဒီဘုရင်က ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ထောက...
လျှပ်စစ်မီးသတင်း အထောက်အထား မှန်ကန် ခိုင်လုံဟု 7Da...